Marka cuntadu ay ka badan tahay cuntada - Cuntooyinka Taayirada
Markay cuntadu ka badan tahay cuntada
Waxaan jecelahay inaan dhahno Meals on Wheels ayaa bixiya wax ka badan oo kaliya cuntada. Cunto caafimaad leh ayaa runtii muhiim u ah kuwa ku hela Cunnooyinka Gawaarida, laakiin qaar badan, booqashada maalinlaha ah ee iskaa wax u qabso saaxiibtinimo leh ayaa ah sida loo qiimeeyay.
Waxaa jira sheekooyin badan oo lagu taageerayo tan oo ka bilaabma mutadawiciin u beddelaya nalalka kuwa cuntada qaata kuwa soo wac 911 marka qofka cuntada qaata uusan ka jawaabin albaabka dhicitaan dartiis. In kasta oo qiimaha mutadawiciinta ay u keenaan dadka qaata cuntada qaab booqasho saaxiibtinimo nooma qarsooneyn, Meals on Wheels America ayaa dhowaan sameysay daraasad cilmiyeed si loo eego bal in adeeggan dheeriga ah ee ay bixisay Meals on Wheels uu ahaa mid la qiyaasi karo. Ku In kabadan Daraasad Cilmi baaris Cunto ah sidoo kale baaray natiijooyinka caafimaadka ee la xiriira keenista maalin kasta ee cuntada nafaqada leh.
Iyada oo lala kaashanayo Dugsiga Caafimaadka ee Jaamacadda Brown, Caafimaadka Cuntada ee Wheels America ayaa daraasad ku sameysay 626 qof oo ku jira liiska sugitaanka ee Meals on Wheels oo ka kala yimid gobollada dalka oo dhan. Qaatayaasha ayaa markaa loo qaybiyey saddex kooxood: kuwa maalin walba la siiyo cunnooyinka, usbuuciiba cuntada la siiyo iyo kuwa ku hadhay liiska sugitaanka. Ogsoonow: In kasta oo barnaamijyada gobollada kale ay leeyihiin liis sugitaan sababo la xiriira baahida sare ee guryaha la geeyo, barnaamijyada magaalooyinka Mataanaha ah weli ma aysan fulin.
Marka ma kuwa helay helitaanka cunnooyinka maalinlaha ah waxay kasbadeen faa'iidooyinka caafimaadka wanaagsan iyo yaraynta go'doominta bulshada, sida aan jecel nahay inaan kor ugu qaadno? Waan ku faraxsanahay inaan ogaannay in jawaabta su'aashaasi ay noqotay haa.
Cunnooyinka maalinlaha ah waxay keenaan natiijooyin caafimaad oo wanaagsan
Daraasaddan ayaa lagu sheegay in dadka waayeelka ah ee maalin walba cuntada la siiyaa ay muujiyeen horumarin xagga qaybaha la xiriira caafimaadka iyo tayada nolosha labadaba. Kuwa la siiyay gaarsiinta cuntada maalinlaha ah waxay muujiyeen natiijooyinka soo socda marka la barbardhigo kuwa aan helin cuntada ama ay heleen qaboojiyaha toddobaadlaha ah:
Caafimaadka maskaxda oo fiicnaaday, gaar ahaan hoos u dhaca niyadjabka iyo walwalka
Caafimaadka jirka oo hagaagay
Waxay u egtahay suuragalnimada dhicitaan
Dareenka go'doominta iyo kelinimada
Walwal yar oo ku saabsan inaad sii joogi karto guriga
Dareenka nabadgelyada oo kordhay
Suurtagalnimada sare ee cunida caafimaadka leh
“Keenida isku darka nafaqada iyo isdhexgalka bulshada labadaba waa waxa barnaamijkeena Cunnada ee Wheels-ka lagu aasaasay,” ayuu yiri Patrick Rowan, oo ah agaasimaha fulinta ee Meals on Wheels. “In kasta oo aysan runtii ahayn wax lala yaabo in la arko gunaanadka daraasaddan, haddana waa wax weyn in la ogaado in shaqada hagar la’aanta ah ee in ka badan 12,000 oo mutadawiciin ah aysan ku qanacsaneyn oo keliya kuwa cuntada naga qaatay, laakiin cilmi ahaan loo caddeeyay inay saameyn togan ku leedahay caafimaadka iyo fayoobaanta. ”
Qaatayaasha kooxda ee hela usbuuclaha cunnooyinka la qaboojiyey waxay sidoo kale muujiyeen horumar xagga caafimaadka jirka iyo maskaxda labadaba. Hase yeeshe dhammaan qeybaha oo dhan, kooxdii maalin kasta heli jirtay cunnada kulul waxay muujiyeen horumarka ugu badan.
Kuwa qaata gaarsiinta cuntada maalinlaha ah, boqolkiiba 77 ayaa sheegay in adeegyada laga helo barnaamijka cuntada ee guriga la geeyo ay ka caawiyeen iyaga inay dareemaan cidlo yaraan. Kuwa maalin walba qaata cunnooyinka waxay sidoo kale u badan tahay inay soo sheegaan horumarkooda caafimaad marka loo eego kuwa aan helin.
U adeegida kuwa ugu nugul
Sida caadiga ah, barnaamijyada Meals on Wheels ee magaalooyinkan Mataanaha ah waxay u adeegaan qof kasta oo ka faa'iideysan kara adeegga. Dadka xiisaha lihi way qori karaan haddii aysan haysan helitaan cunto nafaqo leh ama ay si fudud uga faa'iideysan karaan ku habboonaanta in cunno caafimaad leh maalin walba la gaarsiiyo si loo yareeyo wixii dhibaato ah ee ay ku qabaan diyaarinta cunnooyinka caafimaadka qaba. Dadka cuntada qaata uma baahna inay muujiyaan nooc kasta oo dhaqaale xumo ah si ay u helaan cuntada, laakiin daraasadda in ka badan Cunnada ayaa muujisay in kuwa codsada cuntooyinka ay si aad ah uga nugul yihiin dadka waaweyn guud ahaan:
Waayeelka qaran ahaan
Waayeelka daraasadda cuntada
Ka warbixi inaad ku jirto xaalad caafimaad ama mid liidata
Ka cabso diiqad
Awoodin inay wax ka iibsadaan raashinka
Awoodin inay diyaariyaan cuntada
Cunnooyinka Lugaha ayaa u jira in loogu adeego dhammaan kuwa ka faa'iideysan kara adeegga, daraasaddanna waa xusuusin wanaagsan in dad badan oo barnaamijyadayada maxalliga ah ay u adeegaan ay ka mid yihiin deriskeenna ugu nugul. Qaar badan oo ka mid ah dadkaas, helitaanka cunnooyinka kulul maalin kasta macnaheedu waa farqiga u dhexeeya ku noolaanshaha guriga ama u guurista guriga daryeelka ama xarun lagu noolaado oo la caawiyo.
Marka lagu daro u oggolaanshaha waayeelka iyo dadka naafada ah inay ku noolaadaan guriga, halka ay doonayaan inay ku noolaadaan, adeegyada ka caawiya dadka inay si madax-bannaan ugu noolaadaan sidoo kale waxay sameynayaan dareen dhaqaale. Celceliska qiimaha nolosha ee guryaha xanaanada ee Minnesota waa $62,000. Iyada oo laga caawinayo barnaamijyada sida Meals on Wheels, deriskayaga waayeelka ah ayaa si madax-bannaan u noolaan kara iyaga oo iska ilaalinaya tallaabadan qaaliga ah illaa iyo inta suurtogalka ah.
Adiga ama qof aad taqaanid ma ka faa'iideysan karaa helitaanka Cunnooyinka Gawaarida? Waxaad ka baran kartaa halkan. Haddii aad si fudud u jeclaan lahayd inaad ku taageerto barnaamijyada Meals on Wheels ee xaafaddaada, waad awoodaa Saxeex iskaa wax u qabso ama tabaruc. Daraasad buuxda oo ka badan Cunnada ayaa laga heli karaa foodsonwheelsamerica.org/mtam.